Iphoyisa lisolwa ngokudlwengula ingane lidle amankwebevu | isiZulu
Iphoyisa lisolwa ngokudlwengula ingane lidle amankwebevu
Iphoyisa lisolwa ngokubulala umkalo ‘nomakhwapheni’
Iphoyisa lisolwa ngokuzalisa isiboshwa
Iphoyisa lisolwa ngokudubula intombi lase liyazibulala
New Delhi - Iphoyisa laseNdiya likhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngezinsolo zokudlwengula ingane yentombazane eneminyaka engu-7 ubudala, kanti lokhu kusolakala ukuthi likwenze licwile ezinkambeni zikaFaro, kusho isikhulu samaphoyisa ngeSonto.
Kuthiwa ozakwabo baleli phoyisa bahlabe umkhosi kulandela ukuthola le ngane inqunu endlini okuhlala kuyo leli phoyisa e-Uttar Pradesh ebusuku ngoMgqibelo, kusho okhulumela amaphoyisa endawo uSuperintendent Vipin Tada etshela i-AFP.
"Sibe sesihambisa umntwana ukuba ayohlolwa, kanti okwamanje sisalinde imiphumela," kusho uTada.
"Iphoyisa nalo lizohlolwa ukuze kuvele ukuthi ngabe belinkunka utshwala noma cha endlini elihlala kuyo."
OLUNYE UDABA: Kudlwengulwe owesifazane eNdiya
IPress Trust of India ibike ukuthi izakhamuzi ebeziwotha ubomvu zizame ukuhlasela isiteshi samaphoyisa kule ndawo zimelene nalesi sigameko, nokho uTada uthi izakhamuzi zithobe umoya sezizwa ukuthi leli phoyisa liboshiwe.
INdiya inomlando ongemuhle wokunukubezwa kwabantwana ngokocansi, njengoba engu-20 000 amacala alolu hlobo abikiwe ngo-2015, ngokusho kwemiqulu kahulumeni.
Yize leli lizwe seliqinise imithetho yalo mayelana nezigameko zokuhlukumeza ngokocansi kulandela ukuthi kwadlwengulwa owesifazane esebhasini ngo-2012 washona, lezi zigameko zisayinsakavukela umchilo wesidwaba.
Emizuzwini eyi-20 edlule